မြန်မာပြည်သားတွေ သတိမပြုမိတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို လေးနက်စွာပြောလာတဲ့ ရွှေရည်သိန်းတန်
ကွယ်လွန်သွားပြီ ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံကျော် တေးသံရှင်ကြီး တွံတေးသိန်းတန် ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေချစ် ခင်အားပေးရတဲ့ နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်ကြီးပါ။ သူ့ရဲ့သမီးလေး ရွှေရည်သိန်းတန်ကလည်း ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့သွေး အပြည့်အဝပါသူတစ်ဦးမို့ သီချင်းတွေဆိုရင်း အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ဘေးဒုက္ခတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေ သတိမပြုမိတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို […]
ဩော် …အတိတ်​တဘောင် ဩဘာထွန်းတဲ့ ဇဗ္ဗူဒီပါ လက်ျာတောင်ကျွန်းတဲ့…. (ဗန်းမော်ရွှေကူနားကဒုတိယမြစ်ကျင်းမှာ ကြက်တူရွေး ရေသောက်ပီဆိုရင် တစ်ပြည်လုံးရေကြီးတယ်တဲ့ …ကြက်တူရွေးရေငုတ်နေပြီ အထူးသတိရှိကြပါတော့ …) လွန်ခဲ့တဲ့ လက တစ်လလုံး အဲ့ပုံတွေပဲ facebook မှာတွေ့ နေရ တာ သတိမထားခဲ့ဘူး..။ ထင်လဲ မထင်ခဲ့ဘူး..။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ […]
စတုတ္တရုံးချိန်း စတုတ္တရုံးချိန်းမှာ ကလေး ဖခင်နဲ့ အဘွားကို စစ်ဆေးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပေးမယ့် ကလေးဖခင်တယောက်နဲ့ပဲ အချိန်တွေ ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ ရှည်လျားတဲ့ စစ်မေးခြင်း၊ အဖြစ်အပျက်တွေထဲက သိသင့်တာကိုပဲ ထုတ်ရေးပါ့မယ်။ ၁- အရင်တုန်းက မီးမီးလေးက အောင်ကြီးကို မီးမီးဖင်ဖုကို ဆိတ်တာ သူပါပဲ ဆိုတဲ့ ဖိုင်ရှိပါတယ်။ […]
ဆရာဝန်နဲ့ ပြသခြင်းမပြုဘဲ ခေါင်းကိုက်တိုင်း ဆေးဝယ်သောက်လေ့ရှိသူများ ဖတ်ရန်
အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ် ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ၊ သူမ ခေါင်းကိုက်တိုင်း ကိုယ့်ဖာသာ ဆေးဝယ်သောက်လေ့ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ သူမဟာ တစ်နှစ်ကြာ မိမိဖာသာ ဆေးဝယ်သောက်ရင်း၊ နောက်ဆုံးတော့ ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ခံစားခဲ့ရပြီး၊ အသက်သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီးဟာ Migraines လို့ခေါ်တဲ့ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါ၊ မီးယပ်လာတိုင်း နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ […]
ဒီကနေ့ (၁၄.၈.၂၀၁၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ နေပြည်တော် Wisdom Hill မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှုကို (၄) ကြိမ်မြောက် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့စစ်ဆေးမှုမှာ ဗစ်တိုးရီးလေး ဖခင်နဲ့ အဘွားတို့ကို စစ်ဆေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ယခုအချိန်ထိ စစ်ဆေးမှုပြီးဆုံးခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့စစ်ဆေးမှုမှာ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ ဖခင်က ရုံးတော်သို့ ဗီဒီယိုတစ်ခု တင်သွင်းခဲ့ပြီးတော့ […]
အောင်ကြီး နဲ့ ကိုကို၊ ညီညီတို့ ပါဝင်တဲ့ ဓာတ်ပုံ (၅)ပုံကိုပြတော့ ဗစ်တိုရီးယားလေးက ခဲတံနဲ့ထောက်ပြ..
အောင်ကြီး၊ ကိုကို၊ ညီညီရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ပြီး ကလေး ရွေးပြတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်ကို သက်သေတင် ဗစ်တိုးရီးယားလို့ လူသိများတဲ့ လိင်ပိုင်ဆိုင်ရာစော်ကားခံခဲ့ရတဲ့ ၃နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အမှုရဲ့ လေးကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းဖြစ်တဲ့ဒီကနေ့ သြဂုတ် ၁၄ရက်နေ့ ရုံးချိန်းမှာ ကလေးငယ်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက ရုပ်သံဖိုင်တစ်ခုကို သက်သေအဖြစ် တရားရုံးကို တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ […]
ကဲ ရှင်းသွားပြီနော် သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားကို ဓာတ်ပုံပြပီးမေးလိုက်သောအခါ
ကဲ ရှင်းသွားပြီနော် သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားကို ဓာတ်ပုံပြပီးမေးလိုက်တာ ဒီကြောင်းကိုတော့ မပိုးဖြူအကောင့်ကနေပီတင်ထားတွေ့ရပါတယ် သတင်းအမှန်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်… ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတော့ စောင့်မျှော်နေကြယုံပဲ ရှိပါတော့တယ်…. အမှန်တရားအတိုင်း အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ပါစေ….. မပိုးဖြူ ရေးတင်ထားတာကတော့…အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်…. ကဲ ရှင်းသွားပြီနော် V သမီးလေးကို ဓာတ်ပုံပြပြီး ရွေးခိုင်းလိုက်တော့ အောင်ကြီးကို V သမီးလေးကမသိဘူးတဲ့ရှင်းလား ကိုကို […]
( သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိ) ဆရာဇင်ယော်နီ ရဲ့ တပတ်စာ မနောမယ ဟောစာတမ်း…
သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့အထိ ကံ ဉာဏ် ဝီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် … ဇင်ယော်နီ တနင်္ဂနွေ တနင်္လာ အင်္ဂါါ ဗုဒ္ဓဟူး ကြာသပတေး သောကြာ စနေ ကံ ဥာဏ် ၀ီရိယ သုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင် ကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသော် […]
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရတဲ့ အသက် ၃ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ် ဗစ်တိုးရီးယားအမှုရဲ့ သြဂုတ် ၁၄ ရက်နေ့ လေးကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းမှာတော့ တရားလို ဖခင်ဖြစ်သူက ကလေးငယ်ကျောင်းရဲ့ စီစီတီဗီမှတ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကလေးငယ် ပြောဆိုချက်တွေကို တရားခွင်မှာ ထွက်ဆိုချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ လေးကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းမှာ ကလေးငယ်ရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူက ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ဇနီး […]
ရင်နာစရာ ကောင်းတဲ့ အမေ့ခံပုံရိပ်တချို့ …
ယခုနှစ်မိုးရာသီဇာတိမြေ အပြန်မှာထူးထူးခြားခြားမိုးများတာကြောင့် မကြုံစဖူးရေကြီးမှုနဲ့ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဘီးလင်းမြို့ အပါအဝင် မွန်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာစိုးရိမ်ရေမှတ် ဆိုပြီးပြောနေတာတွေ ရှိပေမယ့် စိုးရိမ်ရေမှတ်ဆို တာ ဘယ်အမှတ်လဲဆိုတာတော့ ကိုယ်တွေ့မကြုံရသေးတော့ မသိသေးပါဘူး။ ‌မြေတွေပြိုတယ်၊ တံတားတွေကျိုးတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် အပြန်လမ်းမှာတံတားဖြတ်တိုင်းရင်တထင့်ထင့်နဲ့ပါပဲ။ စစ်တောင်းတံတားပေါ် အရောက်မှာစစ်တောင်းမြစ်ကို မြင်ရချိန်မှာသွေးပျက်စ ပြုလာပါတယ်။ စစ်တောင်း မြစ်ရေက […]